कालो दिवस मनाइँदै : पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाइ, राजा महेन्द्रले यसरी गरेका थिए ‘कु’! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/कालो दिवस मनाइँदै : पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाइ, राजा महेन्द्रले यसरी गरेका थिए ‘कु’!
‘दोषी चश्मा’ कथा सङ्ग्रह प्रकाशनपछि राजनीतिमा व्यस्त हुनुभएका बिपीलाई सुन्दरीजल बन्दी गृह साहित्य रचना गर्न वरदान सावित भएको थियो । जहाँबाट यौ:न मनोविश्लेषणवादी धाराका दर्जनौँ कृति नेपाली साहित्यले पाउन सक्यो । बन्दी गृहमा रचना भएका कृतिमा ‘श्वेतभैरवी’ कथासङ्ग्रह, ‘मोदीआइन’, ‘बाबु, आमा र छोरा’, ‘सुम्निमा’, ‘तीन घुम्ती’, ‘हिटलर र यहुदी’ लगायत उपन्यास रचना गर्नुभएको थियो ।
विश्व युवा वैज्ञानिकको सम्मेलनका लागि छनोटमा परे नेपाली युवा